ဖြူဖြူ (ကိုယ်ပိုင်အိမ်)'s Comments - ရွှေမြို့တော်
ရွှေမြို့တော်မိမိ စာမျက်နှာမိမိစာမျက်နှာ အလှဆင်နည်းအလှဆင်ရန် ကုဒ် (၁)အလှဆင်ရန် ကုဒ် (၂)အလှဆင်ရန် ကုဒ် (၃)အလှဆင်ရန် ကုဒ် (၄)ရုပ်ပုံဖြင့် မန့်ပေးရန်အဖွဲ့ဝင်များဓါတ်ပုံများဖိုရမ်တွင်းစာပေကဗျာဟာသဥာဏ်စမ်းအထွေထွေပြည်တွင်းသတင်းပြည်ပသတင်းဘလော့များကဗျာရသဗဟုသုတဆောင်းပါးဝတ္တုတိုတင်ရန်ကဗျာဘလော့ဟာသဗွီဒီယိုသီချင်းများသီချင်း (1)သီချင်း (2)သီချင်း (3)အဖွဲ့ငယ်လေးများစကားပြောခန်း
ဖြူဖြူ (ကိုယ်ပိုင်အိမ်)'s Comments
← Back to ဖြူဖြူ (ကိုယ်ပိုင်အိမ်)'s Page
အမှတ်တရ မှတ်ချက်စကားများ (မှတ်ချက် 1,558 ခု)
မှက်ချက်ပေးရန်အတွက် မြို့တော်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ပြီးသူဖြစ်ပါကလည်း ရွှေမြို့တော် တွင်းဝင်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်
9:15pmတွင် သြဂုတ်လ 9, 2012မှာ, ကျော်ကျော် ပြောကြားခဲ့သည်က… ဟလိုပါနော် မနေကောင်းလားလာလည်ပါတယ် နော် 7:24amတွင် သြဂုတ်လ 9, 2012မှာ, +++တတိုင်းမွှေး+++ ပြောကြားခဲ့သည်က… 4:11pmတွင် သြဂုတ်လ 8, 2012မှာ, Dhlaing ပြောကြားခဲ့သည်က… 12:18pmတွင် သြဂုတ်လ 8, 2012မှာ, +++တတိုင်းမွှေး+++ ပြောကြားခဲ့သည်က… ညီမလေး..၀၀စား.... ကောင်းကောင်းအိပ်....လှလှလေးနေ......ဟုတ်လား..
9:42pmတွင် သြဂုတ်လ 7, 2012မှာ, ဂမ္ဘိရ လေဗွေ ပြောကြားခဲ့သည်က… လက်ဆောင်မပါလို့ပြန်ယူလိုက်ဦးမယ်နော် 3:47amတွင် သြဂုတ်လ 7, 2012မှာ, +++တတိုင်းမွှေး+++ ပြောကြားခဲ့သည်က… ..ခင်မင်မှုများ...မေ.မသွားအောင်..လက်ဆောင်လေးများထားခဲ.တယ်..နော် 1:20amတွင် သြဂုတ်လ 7, 2012မှာ, aung kyaw min ပြောကြားခဲ့သည်က… အလှ တရားတိုင်းမှာ ရိုးသားမှု.ရှိတယ်
ငါပြောချင်တာက မင်းကရိုးသားတယ် ဒါကြောင့်မင်းက လှနေတာ လို.ထင်တယ်
1:11amတွင် သြဂုတ်လ 7, 2012မှာ, မာကာကင်း ပြောကြားခဲ့သည်က… ဖြူဖြူမင်းဆီအလည်လာတယ်နော် မင်္ဂလာပါနော် တို့ အိမ်လည်းအလည်လာခဲ့ပါနော်
ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ မာကာကင်းပါ 2:38pmတွင် သြဂုတ်လ 6, 2012မှာ, Dhlaing ပြောကြားခဲ့သည်က… စိတ်ဆိုးရဝူးနော်
2:23pmတွင် သြဂုတ်လ 6, 2012မှာ, Dhlaing ပြောကြားခဲ့သည်က… 5:34pmတွင် သြဂုတ်လ 5, 2012မှာ, ချစ်ဦးမောင် ပြောကြားခဲ့သည်က… လာလည်သွားတယ်နော်...
ဖြူစင်စိတ်ထား ရင်မှာထားလို့ မောင်နှမရင်းလိုခင်ပါတယ်.. 10:35amတွင် သြဂုတ်လ 5, 2012မှာ, +Atte Lay ♫ ♪ Child ♫ ♪ ပြောကြားခဲ့သည်က… လာလည် ပါတယ် ဗျ ............... မင်္ဂလာပါနော်.................... ပန်းလေး လို သင်းပြန့်မွှေးကြိုင် နိုင် ပါစေ အမီးလေးပန်းလေးတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်မယ် ထင်ပါတယ် လှ တယ်နော် ........................... ကြိုက်ဆယ် မို့ ရားတစ်ခြား အိမ် တွေလည်း လည်လည် တွားလိုက် အုံးမယ်နော် ........ ဘိုင်....... တာ့တာ........ See you 12:40amတွင် သြဂုတ်လ 5, 2012မှာ, +++တတိုင်းမွှေး+++ ပြောကြားခဲ့သည်က… ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာ..ခဏလေးနဲ.သူငယိချင်းတွေရတယ်..နော် 10:51pmတွင် သြဂုတ်လ 4, 2012မှာ,9လုံး ပြောကြားခဲ့သည်က… ဟိုင်းလာလည်သွားတယ်နော် ပုံလေးတွေကချစ်စရာလေးတွေသဘောကျတယ် 10:13pmတွင် သြဂုတ်လ 4, 2012မှာ, Klinn ♠♠သရဲလေး♠♠ ပြောကြားခဲ့သည်က… လာလည်သွားတယ်နော် သယ်ရင်း
ပျော်၇ွှင်ပါစေ အချိန်ရရင်လည်း လာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် 9:30pmတွင် သြဂုတ်လ 4, 2012မှာ, ဝေယံစိုး ပြောကြားခဲ့သည်က…ိ်ိုနေကောင်းတယ်နော် မဖြူဖြူ ပျင်းနေလို့ လာလည်ခွင့်ပြုပါနော် ........ကျွန်တော်က ဘယ်သူလဲ ဆိုတော့ ကမ္ဘာမှာ အလှမယ်သွားရှာ တာ အဲ့ ဒါ မဖြူဖြူကို လာပို့တာ သူက ကမ္ဘာအလှမယ်ပါ ...........စိတ်မဆိုးနဲ့ နော် ခင်လို့ပို့လိုက်တာပါ.......
8:57pmတွင် သြဂုတ်လ 4, 2012မှာ, ချမ်းကိုကို ပြောကြားခဲ့သည်က… 8:49pmတွင် သြဂုတ်လ 4, 2012မှာ, hminewai.2040@gmail.com ပြောကြားခဲ့သည်က… ဖြူရေသူငယ်ချင်းဖြစ်လို့ရမလား
အမှတ်တရ စကားများ ရေးသားပေးကြခြင်း မရှိသေးပါ!
လက်ဆောင်ပေးရန် Alessandro Si Thu
လက်ဆောင်ပေးရန် angry birds
လက်ဆောင်ပေးရန် arkar hein
လက်ဆောင်ပေးရန် Aung Kaung Sett
လက်ဆောင်ပေးရန် aung khaing
လက်ဆောင်ပေးရန် aung ko
လက်ဆောင်ပေးရန် aung myo
+++တတိုင်းမွှေး+++ အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
+ လရိပ် (ကာရန်မဲ့အလွမ်း) အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
© 2015 Created by တေဇ. Powered by
Badges | ပြဿနာတခုခုတင်ပြရန် | Terms of Service